Chikwata cheLos Angeles Lakers Chinosimudza Mukombe weBasketball Wegore ra2019-2020
Chikwata chemutambo webasketball mu National Basketball Association, che Los Angeles Lakers, chakasimudza mukombe we basketball wegore ra 2019-2020 mushure mekukunda chikwata che Miami Heat nezvibodzwa 106-93.
Mukombe uyu wave we gumi ne minomwe wasimudzwa ne maLakers izvo zvavaenzanisa nechikwata che Boston Celtics chine mikombe gumi neminomwe.
Vanofarira zvemitambo, VaTafadzwa Munjanja vanoti vatambi vatatu vakatamba zvikuru ndi Lebron James na Anthony Davies, ve maLakers, kozouyavo Jimmy Butler na Edrice Adebayo ve Miami Heat.
Pamutambo wekupedzisa gore uyu, LeBron James akasimudza mukombe wemutambi anokosha, weBill Russell Trophy NBA Finals Most Valuable Player Award, ke china.
LeBron anoramba achienzaniswa nemutambi akaita mukurumbira kare, Michael Jordan, vamwe vachiti achine makore mazhinji ekutamba zvekuti achapfuura Michael Jordan panguva iyo anoemda pamudyandigere.
VaMunjanja vanoti mumutambo wekupedzisira uyu, mutambi wakakatyamadza vanhu zvikuru ndi Tyler Christopher Herro, we Miami Heat, ane makore makumi maviri, uyo vanoti wakatamba semunhu ange achitamba mumutambo uyu kwemakore mazhinji.